Qaraxyo loo maleegay gudoomiyaha maxkamada ciidamadda oo la fashiliyey
Qaraxyo loo maleegay gudoomiyaha maxkamada ciidanka oo la fashiliyey
Xasan Cali Nuur ayaa gobolka Gedo u jooga maxkamadeynta latuhunsaneyaal Al-Shabaab ah.
MUQDISHO, Soomaaliya – Qaraxyo culus ayaa laga soo saarey wadada isku xirta magaalooyinka Beledxaawo iyo Doolow ee gobolka Gedo, sidda ay sheegeen saraakiil ammaan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Sidda laga soo xitay illo wareedyo muhiim ah, qaraxyadda oo nooca culus ah ayaa lasoo saarey Talaadadii, 15-ka September, 2020-ka.
Saraakiisha amniga ayaa rumeysan in bartilmaameedka qaraxyaddaan uu ahaa wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya, Gaashaanle Sarre Xasan Cali Nuur [Shuute].
Mr Shuute ayaa gobolka u jooga maxkamadeynta eedeysaneyaal lagu tuhunsan yahay in ay ka tirsan yihiin maleeyshiyaadka Al-Shabaab.
"Ciidamadda u tababaran in ay soo saaraan miinooyinka ayaa ku guuleystay in ay si nabad ah ku fashiliyeen dhagartaan ay maleegtay argagixisada. Xogta goobta ay ku aaseen Miinada waxaan ka helnay ciidamadeena aan la aqoonsan [dhar cadka]," ayuu yiri sarkaal u waramay Garowe Online.
Al-Shabaab ayaa joogitaan culus ku leh degaanada dhaca gobolka Gedo, halkaasoo ay ku beegsato ciidamada shisheeye iyo kuwa Soomaaliya, iyaddoo adeegsaneysa xeelado isugu qarax iyo weerar toos ah.
Bishii September, 25-keeda sanadkii 2019-kii, Shuute ayaa ka badbaadey qarax miino oo kolanyo uu la socday lagula eegtay wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye, waxaana ka dhashay khasaaro kala duwan.
Shuute ayaa waqtigaas kasoo laabtay xerada Ceel Saliini ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasoo uu habeenkii ku hoyday. Booqashadaas waxay timid maalmo kadib markii Al-Shabaab ay weerartay saldhigaas ciidan.
Mareykanka oo ka hadlay duulaanka DF ee Gedo iyo xaaladda Soomaaliya
Soomaliya 25.02.2020. 12:31
Hadalka mas'uulkan ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan dowladda Mareykanka ka bedeshay siyaasadeeda ku aadan Jubaland.
Qarax khasaaro sababay oo ka dhacay magaaladda Muqdisho
Soomaliya 18.08.2020. 13:20
Ilaalada wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo dilay mas'uul
Soomaliya 11.07.2020. 22:00
Soomaliya 01.01.2020. 22:37
2019: Weeraradii ugu dhimashada badnaa ee ka dhacay Soomaaliya
Soomaliya 31.12.2019. 07:12
Hoobiyeyaal lagu garaacay qaybo kamid ah magaalada Muqdisho
Soomaliya 10.09.2020. 20:45